တရားမြှတ-လှတျလပျခွငျးနဲ့မသှေ တို့ပွညျ – Federal Journal
အထကျပါစာပိုဒျတှဟော မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံ တျောသီခငျြး ရှဆေုံ့းအပိုငျးက သီခငျြးစာသားတှေ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ တရားမြှတခွငျး ((justice))၊ လှတျလပျခွငျး ((freedom or liberty)၊ ငွိမျးခမျြးခွငျး (peace)၊ ခှငျ့တူညီမြှခွငျး (equality) ဆိုတဲ့ လူသား လောက သာယာစကွေောငျး ကောငျးမွတျခွငျးတရား တှကေို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ ဘယျလို နိုငျငံမြိုးလဲဆိုရငျ တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျး၊ ငွိမျးခမျြးခွငျး၊ ခှငျ့တူညီမြှခွငျးဆိုတဲ့ ကောငျးမွတျခွငျး တှနေဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ တိုငျးပွညျဖွဈတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျ ပါပဲ။ အဲဒီလို ကောငျးမွတျခွငျးတှကေို ပွညျထောငျစုရဲ့ အမှအေဖွဈနဲ့ အမွဲတမျး တညျတံ့နစေဖေို့ ထိနျးသိမျး ကွမယျဆိုပွီးတော့လညျး အဓိဋ်ဌာနျပွုထားပါသေး တယျ။
၁၉၄၇ ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအခွခေံဥပဒေ နိဒါနျးမှာ ]]တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျး၊ ညီမြှခွငျး တညျးဟူသော လောကပါလတရားမြားကို အခွပွေု ကာ၊ လူသတ်တဝါခပျသိမျးတို့၏ ငွိမျးခမျြးသာယာရေးကို ခိုငျမွဲတညျတံ့အောငျ ထိနျးသိမျးရနျ သန်နိဋ်ဌာနျ၍လညျး ကောငျး To maintain social order on the basis of the eternal principles of JUSTICE, LIBERTY AND EQUALITY -အင်ျဂလိပျမူ။)}}လို့ ပွဆိုထားပွီး ]]တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျးနဲ့ ညီမြှခွငျး}}ဆိုတာ တှဟော ဘယျလို တရားမြှတမှု၊ ဘယျလို လှတျလပျမှု၊ ဘယျလို ညီမြှမှုတှလေဲဆိုတာကိုပါ အောကျပါအတိုငျး ဆကျလကျ ဖှငျ့ဆိုပွထားလိုကျပါသေးတယျ။
]]လူမှုဆကျဆံရေးတရားမြှတမှု၊ စီးပှားရေး တရားမြှတမှု၊ နိုငျငံရေးတရားမြှတမှု၊ လှတျလပျစှာ တှေးကွံနိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ ဖှငျ့ဟရေးသားဖျောပွနိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ ယုံကွညျနိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ ကိုးကှယျ နိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ ဘုရားကြောငျးကနျစသညျတို့သို့ သှားလာဝတျပွုနိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ ပရိယသေနရှာမှီး နိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ စညျးရုံးနိုငျမှု၊ လှတျလပျစှာ ပွုမူ ဆောငျရှကျနိုငျမှု၊ အဆငျ့အတနျး ညီမြှမှု၊ အခှငျ့အလမျး ညီမြှမှု၊ တရားဥပဒအေရာတှငျ ညီမြှမှုတို့ကို နိုငျငံသား အားလုံးတို့ ရရှိခံစားနိုငျစခွေငျးငှာ အခိုငျအမာ ခံဝနျပွု ရနျ သန်နိဋ်ဌာနျခြ၍လညျးကောငျး(ဥပဒနေိဒါနျး)။}}
ဒါက ၁၉၄၇ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ (၂၄) ရကျ နမှေ့ာ တိုငျးပွညျပွု လှတျတျောက အတညျပွုလိုကျတဲ့ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအခွခေံဥပဒထေဲက ဥပဒနေိဒါနျး ဖွဈပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂအထှထှေညေီလာခံက ၁၉၄၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၁၀) ရကျနမှေ့ာ အတညျပွုလိုကျတဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာလူ့အခှငျ့အရေးကွညောခကျြထကျ တဈနှဈကြျော စောနတောကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ဦးဆောငျတဲ့ နိုငျငံတျော တညျ ထောငျသူဖခငျကွီး (Founding Father)တှရေဲ့ အမြှျော အမွငျကွီးမားခဲ့ပုံကို နောကျလူတှကေ မှနျးဆကွညျ့ ကွဖို့ပါပဲ။ (စကားခပျြ။ ။ ဒီဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအခွခေံ ဥပဒကေို တိုငျးပွညျပွုလှတျတျောက အတညျမပွုမီ (၂) လနဲ့ (၅) ရကျအလိုမှာ ကိုယျ့တဈဖို့ကလှဲရငျ နိုငျငံ နဲ့ နိုငျငံသားတှရေဲ့ အကြိုးစီးပှားကို ထညျ့သှငျး မစဉျးစားတတျတဲ့ မသမာသူတှရေဲ့ လုပျကွံမှုကွောငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနဲ့တကှ တညျထောငျသူဖခငျကွီး တခြို့ ကဆြုံးခဲ့ရပါတယျ။)
ဒီနိဒါနျးမှာ (၁) လူမှုရေးတရားမြှတမှု၊ (၂) စီးပှားရေးတရားမြှတမှုနဲ့ (၃) နိုငျငံရေးတရားမြှတမှု ဆိုပွီး ဖျောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ တရားမြှတမှုလို့ ပွောရငျ ဒီသုံးမြိုးကို ပွောရပါမယျ။ အဲဒီအထဲမှာ စီးပှားရေးတရားမြှတမှုနဲ့ နိုငျငံရေးတရားမြှတမှုက လှဲရငျ ကနျြတာအကုနျလုံးက လူမှုရေးတရားမြှတမှု ထဲမှာ အကြုံးဝငျပါတယျ။ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ယဉျကြေးမှု၊ ဘာသာတရားစတာတှဟော လူမှုရေး တရားမြှတမှုထဲမှာ ထညျ့သှငျးရတှေကျရတဲ့ အရာတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဥရောပက နာမညျကြျော ပွငျသဈတျောလှနျ ရေးကွီးရဲ့ ရယူလိုတဲ့ အသီးအပှငျ့တှကေို ပွနျကွညျ့ရငျ လညျး လှတျလပျမှု (liberty)၊ တနျးတူညီမြှမှု (equality)နဲ့ မိတျဆှရေငျးခြာ ရိုငျးပငျးကူညီမှု (fraternity)ဆိုတာတှကေို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ လှတျလပျမှုနဲ့ တနျးတူညီမြှမှုတှကေို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီလှတျလပျမှုနဲ့ တနျးတူညီမြှမှုတှဟော တရား မြှတမှုရဲ့ အခွခေံ ဖွဈပါတယျ။
ဒီမိုကရစေီရဲ့ အခွခေံမူတှနေဲ့ ညီညှတျမှုမရှိလှတဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ(၂၀ဝ၈)မှာတောငျ ဒီမိုက ရစေီစနဈနဲ့ ညီညှတျနသေယောငျယောငျ အယောငျ ဆောငျပွဖို့အတှကျ ]]နိုငျငံတျော၌ တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျးနှငျ့ ညီမြှခွငျးတညျးဟူသော လောက ပါလတရားမြား ပိုမိုထှနျးကားရေး}} (enhancing the eternal principles of Justice, Liberty and Equality in the Union – ပုဒျမ ၆၊ (စ))ဆိုတာကို ထညျ့ထားတာ တှကွေ့ရပါလိမျ့မယျ။
အဲဒီတော့ တိုငျးပွညျမှာ၊ လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျးနဲ့ တနျးတူညီမြှခွငျး ဆိုတဲ့ ကောငျးမွတျခွငျးတရားတှေ တညျရှိထှနျးကား နဖေို့ရာ အလှနျအငျမတနျမှကိုပဲ အရေးကွီးလှပါတယျ။ ကဲ၊ အဆိုအနနေဲ့ကတော့ ဟုတျပါပွီ။ လကျတှမှေ့ာ အဲဒီလို ကောငျးမွတျခွငျးတရားတှေ ရှိ၊ မရှိဆိုတာကို ဘယျလို တိုငျးတာကွညျ့နိုငျကွမလဲ။ ဒီသုံးမြိုးဟာ တဈခုနဲ့တဈခုကလညျး ဆကျစပျနကွေပါတယျ။ တဈခု မရှိဘဲနဲ့ တဈခုရှိတယျလို့ မပွောနိုငျတဲ့ အနအေထား မြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ လှတျလပျခွငျးနဲ့ တနျးတူညီမြှခွငျးတှကေ တိုငျးတာကွညျ့ဖို့ ဖွဈနိုငျပေ မယျ့ တရားမြှတခွငျးဆိုတာကို တိုငျးတာကွညျ့ဖို့က တော့ ပိုပွီး သိမျမှမှေု့ရှိနမေယျလို့ ယူဆမိပါတယျ။ အမရေိကနျ နိုငျငံရေးဒဿနပညာရှငျ ဂြှနျရောလျဈ ကတော့ တရားမြှတမှု ရှိဖို့ဆိုရငျ တနျးတူညီမြှမှု ရှိရ မယျ၊ ဘာတှေ တနျးတူ ညီမြှမှု ရှိရမ လဲဆိုတော့ လှတျ လပျမှုနဲ့ အခှငျ့အလမျးတှဟော တနျးတူညီမြှမှု ရှိနေ ရမယျလို့ တိုငျးတာပွထားပါတယျ။
ဂြှနျ ရောလျဈ (John Rawls)က သူ့ရဲ့ တရား မြှတမှုသီအိုရီ (A Theory of Justice-1971)ထဲမှာ တရားမြှတမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး အခွခေံမူ နှဈခကျြကို ပွဆိုထားပါတယျ။
အကယျြပွနျ့ဆုံးဖွဈတဲ့ အခွခေံလှတျလပျမှုကို တနျးတူညီမြှ ရရှိရမယျ့ အခှငျ့အရေးဟာ လူတိုငျးမှာ ရှိနရေမယျ။ အခွားသူတှကေလညျး အလားတူ လှတျ လပျမှုမြိုးကို ရနကွေရမယျ။ လူတဈဦးခငျြးစီမှာ ရထားတဲ့ အကယျြပွနျ့ဆုံး အခွခေံလှတျလပျမှုနဲ့ အခွားသူတှေ ရရှိထားတဲ့ အလားတူ လှတျလပျမှုတှေ ဟာ သဟဇာတဖွဈနရေပါမယျ။ ဒါက တရားမြှတမှု ပထမအခွခေံမူ ဖွဈပါတယျ။
(က) အခှငျ့အရေးအနညျးဆုံး ဖွဈနသေူတှကေို အကြိုးကြေးဇူးအမြားဆုံး ရနအေောငျ ဆောငျရှကျ ပေးရမယျ။ (ခ) အားလုံးအတှကျ အခှငျ့အလမျးတှကေို မြှမြှတတ တနျးတူညီမြှ ရရှိနိုငျမယျ့ အခွအေနမြေိုး တှနေဲ့ ရာထူးဌာနန်တရတှကေို ဖှငျ့ထားပေးရမယျ။ ဒီလို တရားမြှတမှုရှိတဲ့ အခွအေနမြေိုးတှကေို ရရှိဖို့အတှကျ လူမှုရေးတနျးတူညီမြှမရှိမှုနဲ့ စီးပှားရေးတနျးတူညီမြှ မရှိမှုတှကေို တနျးတူညီမြှမှု ရှိကွရလအေောငျ စီမံပွု လုပျပေးထားကွရပါမယျ။ ဒါက တရား မြှတမှု ဒုတိယ အခွခေံမူ ဖွဈပါတယျ။
တရားမြှတမှုပထမအခွခေံမူအရ လူတိုငျးမှာ တနျးတူညီမြှတဲ့ အခွခေံ လှတျလပျမှုတှေ ရှိနရေမယျ။ အခွားသူတှမှော ရနတေဲ့ အခွခေံလှတျလပျမှုမြိုးတှေ ကို ကိုယျ့မှာလညျး တနျးတူညီမြှစှာ ရနရေမယျ။ ကိုယျ ရထားတဲ့ တနျးတူညီမြှ လှတျလပျမှုဟာ အခွားသူတှေ ရထားတဲ့ လှတျလပျမှုနဲ့ သဟဇာတ ဖွဈနရေမယျ။ ဒါဆိုရငျ တရားမြှတမှု ရှိတယျ။
လူတဈယောကျက လှတျလပျမှုကို ရနပွေီး အခွားသူတဈယောကျကတော့ မရတာမြိုး မဖွဈရဘူး။ သူရတဲ့ လှတျလပျ မှုမြိုးကို ကိုယျလညျး ရခှငျ့ ရှိနရေမယျ။ ကိုယျရနတေဲ့ လှတျလပျမှုမြိုးကို သူလညျး ရခှငျ့ ရှိနရေမယျ။ သူရတဲ့ လှတျလပျမှုနဲ့ ကိုယျရတဲ့ လှတျ လပျမှုတှဟော သဟဇာတဖွဈကွရမယျ။ သဟဇာတ ဖွဈမှသာ ပဋိပက်ခတှကေို ရှောငျရှားနိုငျမယျ။ တကယျ လို့ သဟဇာတမဖွဈဘူးဆိုရငျ ပဋိပက်ခတှေ ဖွဈပျေါ လာနိုငျတယျ။ ပဋိပက်ခတှဟော တရားမြှတမှု မရှိလို့ ဖွဈတာလားဆိုတာကလညျးပဲ တှေးစရာဖွဈပါတယျ။
တရားမြှတမှုဒုတိယအခွခေံမူမှာ (က)အရဆိုရငျ အခှငျ့အရေး၊ အခှငျ့အလမျး အနညျးဆုံး ဖွဈနတေဲ့ သူတှကေို အကြိုးခံစားရမှု မြားမြား ရနအေောငျ အခွအေနတှေကေို ဖနျတီးထားရမယျ။ တဈနညျးပွော ရရငျ မတူညီတဲ့ လူတှကေို တူညီတဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့ တှေ ရနအေောငျ ဖနျတီးပေးရမယျ။ (ခ)အရဆိုရငျ တော့ အားလုံးအတှကျ အခှငျ့အလမျးတှဟော တနျးတူ ညီမြှ ဖွဈနရေမယျ။
တခြို့ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အခွအေနအေမြိုးမြိုး ကွောငျ့ အခှငျ့အလမျးနဲ့ အခှငျ့အရေး ရရှိမှု နညျးနေ တတျတယျ။ ဥပဒတှေထေဲမှာ၊ မူဝါဒတှထေဲမှာ တနျးတူ ညီမြှ အခှငျ့အရေးတှေ ပေးထားတယျ၊ တနျးတူညီမြှ အခှငျ့အလမျးတှလေညျး ပေးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကြိုးခံစားရရှိမှုကတြော့ ကိုယျပိုငျအားနညျးခကျြ အမြိုးမြိုးကွောငျ့ မတူညီဘဲ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ]]ပေးကား ပေး၏၊ မရ}}ဆိုတဲ့ အခွအေနမြေိုး ဖွဈပါ တယျ။
ဥပမာပွရရငျ နိုငျငံမှာ လူတိုငျး တက်ကသိုလျတကျ ခှငျ့ ရှိတယျဆိုပါတော့။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ လကျတှေ့ မှာတော့ ငှကွေေးခြို့တဲ့လို့ ကြောငျးတောငျ မတကျနိုငျ တဲ့သူတဈယောကျအဖို့ တက်ကသိုလျကို ဘယျလို တကျ နိုငျမှာတဲ့လဲ။ အဲဒါဆိုရငျ သူ့အဖို့ တက်ကသိုလျကို ဘယျလို ရောကျနိုငျတော့မှာလဲ။ ဒီလို တက်ကသိုလျတကျ ဖို့ နနေသောသာ ကြောငျးတောငျ မတကျနိုငျတဲ့သူတှေ ကို တက်ကသိုလျတကျနိုငျမယျ့၊ တက်ကသိုလျရောကျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို နိုငျငံက ဖနျတီးပေးထားရမယျ။ ဒါဟာ အခှငျ့အလမျးအနညျးဆုံးသူတှကေို အကြိုး ကြေးဇူးအမြားဆုံးဖွဈအောငျ လုပျပေးရတာပါပဲ။ ဒီလို လုပျပေးမှလညျး လူအခငျြးခငျြး၊ နိုငျငံသားအခငျြးခငျြး ကွားမှာ တရားမြှတမှု ရှိမယျလို့ ယူဆထားတာ ဖွဈပါ တယျ။
နိုငျငံသားခငျြးအတူတူ တခြို့က ငှကွေေးနဲ့ ကုသနိုငျလို့ အသကျရှငျရတယျ၊ အသကျရှညျရတယျ။ တခြို့က ငှကွေေးခြို့တဲ့ပွီး မကုသနိုငျလို့ အသကျ သရေတယျ၊ အသကျတိုကွရတယျ။ အဲဒါဆိုရငျ ဒီငှေ ကွေးခြို့တဲ့သူတှေ အသကျမသရေလအေောငျ၊ အသကျ မတိုရလအေောငျ ကုသနိုငျမယျ့ နရောတှကေို ဖနျတီး ပေးထားရပါမယျ။ အခွားသူတှေ ဆေးကုသနိုငျလို့ အသကျရှငျကွ၊ အသကျရှညျကွရပွီး သူတို့ကမြှ ဆေး မကုသနိုငျလို့ အသကျသကွေရ၊ အသကျတိုကွရမယျ ဆိုရငျ ဒါဟာ လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ တရားမြှတမှု မရှိဘူး လို့ ဆိုရပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီတော့ အခှငျ့အလမျးနညျးတဲ့ သူတှကေိုလညျး အခွားသူတှေ ခံစားကွရတဲ့ အကြိုး ကြေးဇူးတှကေိုတော့ ခံစားကွရလအေောငျ နိုငျငံက၊ လူ့အဖှဲ့အစညျးက ဖနျတီးပေးထားကွရပါမယျ။ ဒါမှ သာ တရားမြှတမှု ရှိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
လူတိုငျးလူတိုငျးအတှကျ ရာထူးဌာနန်တရတှကေို ရနိုငျတဲ့ အခှငျ့အလမျးတှကေ တူညီနရေမယျ။ ဒါမှ တရားမြှတမှု ရှိနိုငျတယျ။ လှတျတျောအမတျဟာ လူတိုငျး ဖွဈခှငျ့ ရှိရမယျ။ တရားသူကွီးဆိုတာလညျး လူတိုငျး ဖွဈခှငျ့ ရှိရမယျ။ သမ်မတတို့ ဝနျကွီးတို့ဆိုတာ တှကေလညျး လူတိုငျး ဖွဈခှငျ့ ရှိနရေမယျ။ ဝနျထမျး ဖွဈခှငျ့ဟာ လူတိုငျးမှာ ရှိနရေမယျ။ အကပျရှိမှ ဖွဈနိုငျ မယျ၊ အကပျမရှိရငျ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျ ဒါဟာ တရား မြှတမှု ကငျးမဲ့တဲ့သဘော ဖွဈသှားပါတယျ။ လူတိုငျး အတှကျ တနျးတူညီမြှ အခှငျ့အလမျးတှေ ရနနေိုငျ အောငျ လမျးတှေ ဖှငျ့ထားပေးရမယျ။ အခြို့သူတှေ အတှကျ အခှငျ့အလမျးတှေ ဖှငျ့ထားပေးပွီး အခြို့ သူတှအေတှကျ ပိတျထားတယျဆိုရငျ ဒါဟာ တရား မြှတမှု မရှိခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျး နဲ့ တနျးတူညီမြှခွငျးဆိုတဲ့ ကောငျးမွတျခွငျးတှကေို အထပျထပျ အကွိမျကွိမျ ဆိုခဲ့၊ ဖျောပွခဲ့တဲ့ နိုငျငံတဈ နိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ မွနျမာနိုငျငံသားတှေ တရားမြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျးနဲ့ ညီမြှခွငျးဆိုတဲ့ လောကပါလတရားတှကေို ဘယျလောကျ ရနကွေပါပွီ လဲ။ မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေးရခဲ့တာ ၆၉ နှဈပွညျ့လို့ ၂၀၂၁ ခုနှဈဆိုရငျ နှဈပေါငျး ၇၃ နှဈ ပွညျ့ပါပွီ။ တရား မြှတခွငျး၊ လှတျလပျခွငျးနဲ့ ညီမြှခွငျးဆိုတဲ့ ကောငျး ခွငျးတရားတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မွနျမာနိုငျငံကို အတိတျ၊ ပစ်စုပ်ပနျ၊ အနာဂတျဆိုတဲ့ ကာလသုံးမြိုးနဲ့ ခဉျြးကပျ ကွညျ့ပါမယျ။
လှတျလပျရေးရပွီးနောကျပိုငျး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကာလတှကေို နောကျပွနျ ပိုငျးခွားကွညျ့တဲ့အခါ အရပျသားအစိုးရက တဈစိတျတဈပိုငျး အုပျခြုပျခှငျ့ရ နတေဲ့ လကျရှိကာလ၊ ၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ တတိယစဈအာဏာရှငျစနဈကာလ၊ ၁၉၆၂ ကနေ ၁၉၈၈ အထိ ဒုတိယစဈအာဏာရှငျစနဈကာလ၊ ၁၉၄၈ ကနေ ၁၉၆၂ အထိ ပါလီမနျ ဒီမိုကရစေီကာလ (ဒီပါလီ မနျဒီမိုကရစေီကာလထဲမှာ ၁၉၅၈ ကနေ ၁၉၆၀ အထိ ပထမစဈအာဏာရှငျစနဈကာလ ရှိနတောကို သတိ ပွုရပါမယျ။)ဆိုပွီး ကာလအမြိုးမြိုးကို တှရေ့ပါလိမျ့ မယျ။
အဲဒီတော့ အတိတျကာလကို ၁၉၄၈ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ပိုငျးမယျဆိုရငျ ပါလီမနျဒီမိုကရစေီကာလနဲ့ စဈအာဏာရှငျစနဈကာလဆိုပွီး တှရေ့ပါမယျ။ ပါလီမနျ ဒီမိုကရစေီကာလ မွနျမာနိုငျငံဟာ အာရှနဲ့ ကမ်ဘာမှာ ထိပျတနျးနရော ရရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ ၁၉၆၂ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ စဈအာဏာရှငျစနဈကာလကတော့ မွနျမာဟာ အာရှကို ကြျောလှနျပွီး ကမ်ဘာ့အောကျဆုံးဆိုတဲ့ ခြောကျ ကွီးထဲကို တှနျးခခြံရလို့ ကရြောကျသှားရတဲ့ ကာလ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို အတိတျကာလတဈခုအဖွဈ သတျ မှတျပွီး တရားမြှတမှု၊ လှတျလပျမှုနဲ့ တနျးတူညီမြှမှု ဆိုတဲ့ ကောငျးမွတျခွငျးတရားတှနေဲ့ ရှုမွငျကွညျ့ပါ မယျ။
၁၉၆၂ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ကာလမှာ မကောငျး ဆိုးဝါး မိစ်ဆာစဈအာဏာရှငျတှနေဲ့ နောကျလိုကျ နောကျပါတှဟော နိုငျငံရဲ့ မွပေျေါမွအေောကျ သယံ ဇာတအကုနျလုံးကို ကုနျအောငျ ရောငျးစားသှားခဲ့ပါ တယျ။ သဈတောတှေ အကုနျ ကုနျအောငျ တောငျတှေ ကတုံးဖွဈတဲ့အထိ ခုတျသှားပါတယျ။ တောငျပေါငျး မြားစှာကို တူးဖွိုပွီး ကြောကျစိမျးနဲ့ အခွားရတနာတှေ ကို တူးယူသှားပါတယျ။ ကုနျးတှငျးနဲ့ ကမျးလှနျတှပေါ မကနျြအောငျ ရနေံနဲ့ ဓာတျငှတှေ့ကေို တူးပွီး ရောငျး စားသှားတဲ့အပွငျ ကွိုပွီးပါ ရောငျးစားထားခဲ့ပါသေး တယျ။ မွယောဧကပေါငျးမြားစှာကို မတရားသိမျး ယူပွီး ရောငျးစားသှားပါတယျ။ နိုငျငံရဲ့ စီးပှားရေးမှနျ သမြှ အကုနျ လကျဝါးကွီးအုပျထားပါတယျ။ ဒီအခှငျ့ အရေးကို ကနျြတဲ့ နိုငျငံသားတှကေ မရကွပါဘူး။ စဈအာဏာရှငျတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ နောကျလိုကျနောကျပါ တှကေပဲ ရရှိကွပါတယျ။ နိုငျငံရဲ့ သယံဇာတနဲ့ ပတျ သကျလို့ ဘယျမှာလဲ တနျးတူညီမြှ အခှငျ့အရေး၊ ဘယျမှာလဲ တရားမြှတမှု။
ဒီအတိတျကာလတှမှော နိုငျငံသားတှရေဲ့ လှတျ လပျမှုမှနျသမြှကို ပိတျပငျထားခဲ့တယျ။ လှတျလပျမှုဟာ လူတှကေို အသိÓဏျဖွဈပျေါလာအောငျ ကူပံ့ပေးနိုငျ တယျ။ လှတျလပျမှုရှိရငျ လူတှဟော လှတျလပျစှာ တှေးကွတော့မယျ၊ လှတျလပျစှာ ပွောကွတော့မယျ၊ လှတျလပျစှာ ရေးသားကွတော့မယျ၊ လှတျလပျစှာ ဖတျရှုလလေ့ာကွတော့မယျ။ ဒါတှကေ လူတှကေို အသိနဲ့ Óဏျပညာကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ အသိနဲ့ Óဏျပညာတှေ ရှိလာရငျ လူတှဟော မကောငျးဆိုးဝါး မိစ်ဆာစဈအာဏာရှငျတှကေို တှနျးလှနျပဈကွပါလိမျ့ မယျ။ အဲဒီတော့ မိစ်ဆာစဈအာဏာရှငျတှဟော သူတို့ကို ဒုက်ခပေးမယျ့ လှတျလပျမှုဆိုတာကို လုံးဝ သော့ခတျ ထားလိုကျပါတော့တယျ။
ဒါပမေဲ့ ဒီကာလတှမှောပဲ လှတျလပျမှု ရနတေဲ့ သူတှကေလညျး ရှိနပွေနျပါတယျ။ စဈအာဏာရှငျတှေ၊ စဈအာဏာရှငျတှရေဲ့ သားသမီးတှေ၊ စဈအာဏာရှငျ တှရေဲ့ နောကျလိုကျနောကျပါတှဟော လှတျလပျမှုတှေ အပွငျ ရမျးကားမှုတှပေါ ရနကွေပါတယျ။ အဲဒီစဈ အာဏာရှငျတှနေဲ့ နောကျလိုကျနောကျပါတှဟော သူတို့ လုပျခငျြတာအကုနျလုံးကို လှတျလှတျလပျလပျ လုပျခှငျ့ရနကွေတယျ။ ကနျြတဲ့ နိုငျငံသားတှကေတော့ သူတို့နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ ဖွဈနကွေပါတယျ။ ဘာမှ လုပျခှငျ့မရဆိုတဲ့ အခွအေနတှေေ ဆိုကျရောကျခဲ့ပါ တယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လှတျလပျရေးကွညောစာတမျး၊ အပိုဒျ(၅)မှာ ]]ငါတို့နိုငျငံတျောကွီးသညျ မညျသူ တဈဦးတဈယောကျ တဈဖှဲ့တဈသငျး၏ အမှအေနှဈ မဟုတျ၊ မညျသူတဈဦးတဈယောကျ၏ တဈဖှဲ့တဈသငျး ၏ ပုဂ်ဂလိကအပိုငျ ပစ်စညျးမဟုတျ၊ မညျသူတဈဦး တဈယောကျ တဈဖှဲ့တဈသငျးက ခြုပျကိုငျအနိုငျ သိမျးယူ အကြိုးခံစားအပျသော နိုငျငံမဟုတျ၊ အတိတျ ကာလကゞငျး၊ ယခုမကျြမှောကျတှငျゞငျး၊ နောငျလာ လတ်တံ့သော အနာဂတျကာလ၌လညျးကောငျး၊ ငါတို့ ပွညျထောငျစုကွီးအတှငျး၌ မှီတငျးနထေိုငျကွသော ကွီးငယျဝေးနီးကား မခွား၊ သစ်စာတျောခံနိုငျငံသား ဟူသရှတေို့၏ အမှအေနှဈအပိုငျပစ်စညျး အကြိုး ခံစားရာ ဖွဈသညျ}}လို့ ဆိုထားပမေယျ့ တကယျ့ တကယျမှာတော့ စဈအာဏာရှငျတှနေဲ့ နောကျလိုကျ နောကျပါတှကေသာ နိုငျငံတျောကို သူတို့အပိုငျပစ်စညျး လို အသုံးခခြဲ့ကွတယျ။ နိုငျငံတျောမှာ ရှိနတေဲ့ ကနျြ နိုငျငံသားတှအေကုနျလုံးကတော့ တရားမြှတမှု၊ လှတျလပျမှု၊ တနျးတူညီမြှမှုတှနေဲ့ပါ ကငျးဝေးနခေဲ့ကွ ရပါတယျ။
ဒီကာလတှမှော တရားမြှတမှု၊ လှတျလပျမှုနဲ့ တနျးတူညီမြှမှုတှကေို ထုတျဖျောပွောဆိုမိတဲ့သူတှေ ဟာ ဖမျးဆီးအကဉျြးခတြာကို ခံခဲ့ကွရတယျ။ အဲဒါ အပွငျ စဈအာဏာရှငျတှရေဲ့ သတငျးစာ၊ ရဒေီယို၊ ရုပျမွငျသံကွားစတဲ့ မီဒီယာတှကေနလေညျး ဆဲဆိုရမျး ကားမှုတှကေိုပါ ခံကွရပါသေးတယျ။ စဈအာဏာရှငျ တှနေဲ့ နောကျလိုကျနောကျပါတှရေဲ့ သားသမီးတှဟော လညျး လှတျလပျမှုမှနျသမြှကို ရယူထားတဲ့အပွငျ ရမျးကားမှုတှပေါ ပွုလုပျခဲ့ကွတယျ။ အဲဒီလို ရမျးကား မှုတှကေို ခံခဲ့ကွရတဲ့ နိုငျငံသားတှဟော တရားမြှတမှု ကို ပွနျလညျမရရှိခဲ့ကွပါဘူး။
ဒါတှကေ အတိတျမှာ ဖွဈခဲ့တာတှေ ဖွဈပါတယျ။ အတိတျက ဖွဈခဲ့တာတှကေို ပွနျပွောပွောနရေတာက အဲဒီအတိတျမှာပဲ ရပျနဖေို့ မဟုတျဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိပွုရပါလိမျ့မယျ။ အတိတျက ဖွဈခဲ့တာတှကေို နောကျတဈဖနျ ထပျမဖွဈပျေါရလအေောငျ သငျခနျးစာ အနနေဲ့ ဆငျခွငျသုံးသပျပွီး နိုငျငံနဲ့ နိုငျငံသားတှကေ ရှဆေ့ကျသှားကွဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
အတိတျကာလကို တဈစိတျတဈဒသေ ဆနျးစဈ ပွီးတဲ့အခါ အခုပစ်စုပ်ပနျကာလကို သုံးသပျဆငျခွငျ ရှုမွငျကွညျ့ကွပါမယျ။ လကျရှိပစ်စုပ်ပနျကာလမှာ နိုငျငံ တျောရဲ့ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးမှနျသမြှကို ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနေဲ့ လညျပတျနရေပါ တယျ။ ဒါဟာ အရှိတရား ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ နိုငျငံ သားတဈယောကျက တိုငျးပွညျရဲ့ ကံကွမ်မာတဈဝကျ လောကျကို ဆုံးဖွတျခှငျ့ ရရှိနပွေီး ကနျြနိုငျငံသား အားလုံးကတော့ နိုငျငံတျောရဲ့ အကွီးအကဲ သမ်မတကို တောငျ ရှေးခယျြခှငျ့ မရရှိကွတဲ့ အခွအေနမြေိုး ဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံသားတဈယောကျကို မဲတဈမဲနဲ့ နိုငျငံသားပေါငျး ထောငျနဲ့ခြီတဲ့အရအေတှကျက လှတျ တျောအမတျတဈယောကျကိုပဲ ရှေးခယျြခှငျ့ ရှိနပေေ မယျ့ တဈနိုငျငံလုံးမှာရှိတဲ့ လှတျတျောတှရေဲ့ လှတျ တျောအမတျလေးပုံတဈပုံကိုတော့ နိုငျငံသားတဈ ယောကျတညျးက ရှေးခယျြခှငျ့တှေ ရနပေါတယျ။ ဒါက နိုငျငံသားတိုငျးမှာ တနျးတူညီမြှအခှငျ့အရေး မရှိတာမို့လို့ နိုငျငံရေးတရားမြှတမှု မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျ ဖွဈပါတယျ။
လူတဈယောကျ အသကျရှငျရပျတညျလို့ မရနိုငျတဲ့ ဝငျငှေ ၁၂၀ဝဝဝ (တဈသိနျးနှဈသောငျး) ရသူကို အခှနျဆောငျခိုငျးထားပွီး နိုငျငံရဲ့ အရငျး အမွဈတှကေို အမြားဆုံး သုံးစှဲခှငျ့ ရနတေဲ့သူတှကြေ တော့ အခှနျ နညျးနညျးပဲ ဆောငျရတာတှေ ဖွဈနပေါ တယျ။ အခွားတိုငျးပွညျတှမှော နိုငျငံရဲ့ အရငျးအမွဈ တှကေို အမြားဆုံး သုံးစှဲတဲ့သူတှဟော အခှနျကို ၅၀ ရာခိုငျနှုနျး၊ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ဆောငျကွရပမေယျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ အဲဒီလို အမြားဆုံး သုံးစှဲတဲ့သူ တှဟော ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးပဲ ဆောငျကွရတာတှေ ဖွဈနေ ပါတယျ။ ဘယျမှာတဲ့လဲ စီးပှားရေးတရားမြှတမှု။
]]မိနျးမမြားသညျ တူညီသော အလုပျအတှကျ ယောကျြားတို့ ရသော လခမြိုးကို ရနိုငျရမညျ။}} (ပုဒျမ(၁၅)၊ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံအခွခေံဥပဒေ၊ ၁၉၄၇။) ဒီလို ပုဒျမမြိုးကို ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ၊ ပုဒျမ (၃၅၀)မှာလညျး ]]အမြိုးသမီးမြားသညျ တူညီသော အလုပျအတှကျ အမြိုးသားမြား ခံစားခှငျ့ရှိသော အခှငျ့ အရေးနှငျ့ လစာတို့ကို ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။}}ဆိုပွီး ဖျောပွ ထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒရေဲ့ ပုဒျမ(၃၅၂)ထဲမှာတော့ ]]အမြိုးသားမြားနှငျ့ သာ လြျောကနျသငျ့မွတျသညျ့ ရာထူးတာဝနျမြား အတှကျ အမြိုးသားမြားအား ရှေးခယျြခနျ့ထားခွငျးကို ဤပုဒျမအရ အဟနျ့အတားမဖွဈစရေ။}}ဆိုပွီးတော့ ထပျမံထညျ့သှငျးထားကာ အမြိုးသမီးတှကေို ခှဲခွား ထားပွနျပါသေးတယျ။ ဒါတှဟော ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒထေဲက လူမှုရေးတရားမြှတမှု မရှိခွငျး တခြို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိပညာရေးစနဈနဲ့ လညျပတျ နတေဲ့ တက်ကသိုလျတှမှောလညျး အမှတျသတျမှတျမှု မညီမြှခွငျးက စလို့ ကြားမခှဲခွားထားတဲ့ အခွားအရာ တှလေညျး အမြားအပွား ရှိနပေါသေးတယျ။ ဒါတှကေ လညျး လူမှုရေးတရားမြှတမှု မရှိတာကို ပွဆိုနပေါ တယျ။
ဒီမှာ ထုတျနုတျပွထားတာက ဥပမာတခြို့ပဲ ရှိပါသေးတယျ။ တကယျ့ လကျတှမှေ့ာတော့ လူမှုရေး တရားမြှတမှု မရှိတာ၊ နိုငျငံရေးတရားမြှတမှု မရှိတာ၊ စီးပှားရေးတရားမြှတမှု မရှိတာတှဟော ၂၀ဝ၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနေဲ့ သှားနရေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အမြားအပွား ရှိနကွေပါတယျ။ ဒါက လကျရှိပစ်စုပ်ပနျ ကာလရဲ့ မွနျမာနိုငျငံအခွအေနလေညျး ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီတော့ အနာဂတျမှာရော မွနျမာနိုငျငံက ဘယျလို ပုံစံမြိုး ဖွဈလာမှာတဲ့လဲ။ အနာဂတျမှာ မွနျမာ နိုငျငံကို ဘယျလို နိုငျငံမြိုး ဖွဈစခေငျြသလဲ၊ မွနျမာ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးကို ဘယျလို လူ့အဖှဲ့အစညျးမြိုး ဖွဈစေ ခငျြသလဲဆိုတာကို လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေ ဆုံးဖွတျကွရပါလိမျ့မယျ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ မွနျမာ့လူ့အဖှဲ့ အစညျးကို တရားမြှတမှုရှိတဲ့ နိုငျငံ၊ တရားမြှတမှုရှိတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျး၊ လှတျလပျမှုရှိတဲ့ နိုငျငံ၊ လှတျလပျမှု ရှိတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျး၊ တနျးတူညီမြှမှုရှိတဲ့ နိုငျငံ၊ တနျးတူ ညီမြှမှုရှိတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးတှေ ဖွဈစခေငျြသလား။ ဒီလို ဖွဈစခေငျြရငျ ဒီလို နိုငျငံမြိုး၊ ဒီလို လူ့အဖှဲ့အစညျး မြိုးကို ရရှိအောငျ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေ အခုကတညျး က တညျဆောကျထားရပါလိမျ့မယျ။
စားသုံးလိုတဲ့ အသီးကို လိုခငျြရငျ အဲဒီအသီး သီးတဲ့ အပငျမြိုးကို စိုကျပြိုးယူရသတဲ့။ အရိပျကို ခိုခငျြ ရငျတော့ နပေူက စောငျ့ကွရသတဲ့လေ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ တိုးတကျတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးမှနျသမြှကို အဲဒီလူ့အဖှဲ့ အစညျးက လူတှဟော အခြောငျရခဲ့တာတော့လညျး မဟုတျပဘေူးပေါ့။
တရားမြှတမှုလား၊ လှတျလပျမှုလား၊ တနျးတူညီ မြှမှုလား။ အဲဒီကောငျးမွတျခွငျးတရားတှေ မရှိပါဘဲနဲ့ ငွိမျးခမျြးခွငျးဆိုတာကရော ဖွဈနိုငျပါမတဲ့လား။ သငျ ဘာကို အလိုရှိပါသလဲ။ ထိုငျနလေို့တော့ ဘာမှ ဖွဈ မလာဘူးဆိုတဲ့ စကားကို သငျလညျး ကွားဖူး၏၊ ကြှနျုပျ လညျး ကွားဖူး၏၊ အခွားသူမြားလညျး ကွားဖူးထား ကွပါ၏။ ဘယျလို နိုငျငံမြိုးနဲ့ ဘယျလို လူ့အဖှဲ့အစညျး မြိုးပဲဖွဈဖွဈ အဲဒီနိုငျငံနဲ့ အဲဒီလူ့အဖှဲ့အစညျးကို တကယျ ဖနျတီးတညျဆောကျသူတှဟော အဲဒီနိုငျငံ သားတှေ၊ အဲဒီလူ့အဖှဲ့အစညျးက လူတှကေိုယျတိုငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ လိုခငျြလှပါ တယျဆိုတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးမြိုးကိုလညျး ကြှနျတျောတို့ ကိုယျတိုငျကပဲ တညျဆောကျယူရမညျသာ ဖွဈပါ ကွောငျး။
တရားမြှတ-လှတျလပျခွငျးနဲ့ မသှေ၊ ခှငျ့တူညီမြှ လို့ ဝါဒလညျး ဖွူစငျကွစေ။ Óဏျပညာနဲ့ ခဈြခွငျး တရားတှလေညျး တိုးပှားဖွဈထှနျးကွပါစတေညျ့လေ။
၁။ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံ၊ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံ အခွခေံဥပဒေ၊ ၁၉၄၇။
၂။ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၊ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ၊ ၂၀ဝ၈။
၃။ Kropotkin, P. (1927) The Great French Revolution, 1789-1793 (N. F. Dryhurst, Trans.) New York, Vanguad Printings.
၄။ Parvin, P. and Chambers, C. (2012) Political Philosophy: A complete introduction, Hodder & Stoughton Ltd, 338 Euston Road, London.
အထက်ပါစာပိုဒ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံ တော်သီချင်း ရှေ့ဆုံးအပိုင်းက သီချင်းစာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တရားမျှတခြင်း ((justice))၊ လွတ်လပ်ခြင်း ((freedom or liberty)၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း (peace)၊ ခွင့်တူညီမျှခြင်း (equality) ဆိုတဲ့ လူသား လောက သာယာစေကြောင်း ကောင်းမြတ်ခြင်းတရား တွေကို တွေ့ရပါလိမ့််မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘယ်လို နိုင်ငံမျိုးလဲဆိုရင် တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ခွင့်တူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပါပဲ။ အဲဒီလို ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကို ပြည်ထောင်စုရဲ့ အမွေအဖြစ်နဲ့ အမြဲတမ်း တည်တံ့နေစေဖို့ ထိန်းသိမ်း ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အဓိဋ္ဌာန်ပြုထားပါသေး တယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ နိဒါန်းမှာ ]]တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်း တည်းဟူသော လောကပါလတရားများကို အခြေပြု ကာ၊ လူသတ္တဝါခပ်သိမ်းတို့၏ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးကို ခိုင်မြဲတည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းရန် သန္နိဋ္ဌာန်၍လည်း ကောင်း To maintain social order on the basis of the eternal principles of JUSTICE, LIBERTY AND EQUALITY -အင်္ဂလိပ်မူ။)}}လို့ ပြဆိုထားပြီး ]]တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ညီမျှခြင်း}}ဆိုတာ တွေဟာ ဘယ်လို တရားမျှတမှု၊ ဘယ်လို လွတ်လပ်မှု၊ ဘယ်လို ညီမျှမှုတွေလဲဆိုတာကိုပါ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ဖွင့်ဆိုပြထားလိုက်ပါသေးတယ်။
]]လူမှုဆက်ဆံရေးတရားမျှတမှု၊ စီးပွားရေး တရားမျှတမှု၊ နိုင်ငံရေးတရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးကြံနိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ဟရေးသားဖော်ပြနိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်နိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် နိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ဘုရားကျောင်းကန်စသည်တို့သို့ သွားလာဝတ်ပြုနိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ပရိယေသနရှာမှီး နိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးနိုင်မှု၊ လွတ်လပ်စွာ ပြုမူ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ အဆင့်အတန်း ညီမျှမှု၊ အခွင့်အလမ်း ညီမျှမှု၊ တရားဥပဒေအရာတွင် ညီမျှမှုတို့ကို နိုင်ငံသား အားလုံးတို့ ရရှိခံစားနိုင်စေခြင်းငှာ အခိုင်အမာ ခံဝန်ပြု ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချ၍လည်းကောင်း(ဥပဒေနိဒါန်း)။}}
ဒါက ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက် နေ့မှာ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေထဲက ဥပဒေနိဒါန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာချက်ထက် တစ်နှစ်ကျော် စောနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတော် တည် ထောင်သူဖခင်ကြီး (Founding Father)တွေရဲ့ အမျှော် အမြင်ကြီးမားခဲ့ပုံကို နောက်လူတွေက မှန်းဆကြည့် ကြဖို့ပါပဲ။ (စကားချပ်။ ။ ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေကို တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်က အတည်မပြုမီ (၂) လနဲ့ (၅) ရက်အလိုမှာ ကိုယ့်တစ်ဖို့ကလွဲရင် နိုင်ငံ နဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်း မစဉ်းစားတတ်တဲ့ မသမာသူတွေရဲ့ လုပ်ကြံမှုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ တည်ထောင်သူဖခင်ကြီး တချို့ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။)
ဒီနိဒါန်းမှာ (၁) လူမှုရေးတရားမျှတမှု၊ (၂) စီးပွားရေးတရားမျှတမှုနဲ့ (၃) နိုင်ငံရေးတရားမျှတမှု ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တရားမျှတမှုလို့ ပြောရင် ဒီသုံးမျိုးကို ပြောရပါမယ်။ အဲဒီအထဲမှာ စီးပွားရေးတရားမျှတမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးတရားမျှတမှုက လွဲရင် ကျန်တာအကုန်လုံးက လူမှုရေးတရားမျှတမှု ထဲမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာတရားစတာတွေဟာ လူမှုရေး တရားမျှတမှုထဲမှာ ထည့်သွင်းရေတွက်ရတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥရောပက နာမည်ကျော် ပြင်သစ်တော်လှန် ရေးကြီးရဲ့ ရယူလိုတဲ့ အသီးအပွင့်တွေကို ပြန်ကြည့်ရင် လည်း လွတ်လပ်မှု (liberty)၊ တန်းတူညီမျှမှု (equality)နဲ့ မိတ်ဆွေရင်းချာ ရိုင်းပင်းကူညီမှု (fraternity)ဆိုတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုတွေဟာ တရား မျှတမှုရဲ့ အခြေခံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံမူတွေနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိလှတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀ဝ၈)မှာတောင် ဒီမိုက ရေစီစနစ်နဲ့ ညီညွတ်နေသယောင်ယောင် အယောင် ဆောင်ပြဖို့အတွက် ]]နိုင်ငံတော်၌ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် ညီမျှခြင်းတည်းဟူသော လောက ပါလတရားများ ပိုမိုထွန်းကားရေး}} (enhancing the eternal principles of Justice, Liberty and Equality in the Union – ပုဒ်မ ၆၊ (စ))ဆိုတာကို ထည့်ထားတာ တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်မှာ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ တန်းတူညီမျှခြင်း ဆိုတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားတွေ တည်ရှိထွန်းကား နေဖို့ရာ အလွန်အင်မတန်မှကိုပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ကဲ၊ အဆိုအနေနဲ့ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ လက်တွေ့မှာ အဲဒီလို ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားတွေ ရှိ၊ မရှိဆိုတာကို ဘယ်လို တိုင်းတာကြည့်နိုင်ကြမလဲ။ ဒီသုံးမျိုးဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်း ဆက်စပ်နေကြပါတယ်။ တစ်ခု မရှိဘဲနဲ့ တစ်ခုရှိတယ်လို့ မပြောနိုင်တဲ့ အနေအထား မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ တန်းတူညီမျှခြင်းတွေက တိုင်းတာကြည့်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပေ မယ့် တရားမျှတခြင်းဆိုတာကို တိုင်းတာကြည့်ဖို့က တော့ ပိုပြီး သိမ်မွေ့မှုရှိနေမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးဒဿနပညာရှင် ဂျွန်ရောလ်စ် ကတော့ တရားမျှတမှု ရှိဖို့ဆိုရင် တန်းတူညီမျှမှု ရှိရ မယ်၊ ဘာတွေ တန်းတူ ညီမျှမှု ရှိရမ လဲဆိုတော့ လွတ် လပ်မှုနဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေဟာ တန်းတူညီမျှမှု ရှိနေ ရမယ်လို့ တိုင်းတာပြထားပါတယ်။
ဂျွန် ရောလ်စ် (John Rawls)က သူ့ရဲ့ တရား မျှတမှုသီအိုရီ (A Theory of Justice-1971)ထဲမှာ တရားမျှတမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံမူ နှစ်ချက်ကို ပြဆိုထားပါတယ်။
အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်မှုကို တန်းတူညီမျှ ရရှိရမယ့် အခွင့်အရေးဟာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေရမယ်။ အခြားသူတွေကလည်း အလားတူ လွတ် လပ်မှုမျိုးကို ရနေကြရမယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ ရထားတဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး အခြေခံလွတ်လပ်မှုနဲ့ အခြားသူတွေ ရရှိထားတဲ့ အလားတူ လွတ်လပ်မှုတွေ ဟာ သဟဇာတဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါက တရားမျှတမှု ပထမအခြေခံမူ ဖြစ်ပါတယ်။
(က) အခွင့်အရေးအနည်းဆုံး ဖြစ်နေသူတွေကို အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံး ရနေအောင် ဆောင်ရွက် ပေးရမယ်။ (ခ) အားလုံးအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေကို မျှမျှတတ တန်းတူညီမျှ ရရှိနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုး တွေနဲ့ ရာထူးဌာနန္တရတွေကို ဖွင့်ထားပေးရမယ်။ ဒီလို တရားမျှတမှုရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကို ရရှိဖို့အတွက် လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမရှိမှုနဲ့ စီးပွားရေးတန်းတူညီမျှ မရှိမှုတွေကို တန်းတူညီမျှမှု ရှိကြရလေအောင် စီမံပြု လုပ်ပေးထားကြရပါမယ်။ ဒါက တရား မျှတမှု ဒုတိယ အခြေခံမူ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမျှတမှုပထမအခြေခံမူအရ လူတိုင်းမှာ တန်းတူညီမျှတဲ့ အခြေခံ လွတ်လပ်မှုတွေ ရှိနေရမယ်။ အခြားသူတွေမှာ ရနေတဲ့ အခြေခံလွတ်လပ်မှုမျိုးတွေ ကို ကိုယ့်မှာလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရနေရမယ်။ ကိုယ် ရထားတဲ့ တန်းတူညီမျှ လွတ်လပ်မှုဟာ အခြားသူတွေ ရထားတဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်နေရမယ်။ ဒါဆိုရင် တရားမျှတမှု ရှိတယ်။
လူတစ်ယောက်က လွတ်လပ်မှုကို ရနေပြီး အခြားသူတစ်ယောက်ကတော့ မရတာမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ သူရတဲ့ လွတ်လပ် မှုမျိုးကို ကိုယ်လည်း ရခွင့် ရှိနေရမယ်။ ကိုယ်ရနေတဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုးကို သူလည်း ရခွင့် ရှိနေရမယ်။ သူရတဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ကိုယ်ရတဲ့ လွတ် လပ်မှုတွေဟာ သဟဇာတဖြစ်ကြရမယ်။ သဟဇာတ ဖြစ်မှသာ ပဋိပက္ခတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မယ်။ တကယ် လို့ သဟဇာတမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တယ်။ ပဋိပက္ခတွေဟာ တရားမျှတမှု မရှိလို့ ဖြစ်တာလားဆိုတာကလည်းပဲ တွေးစရာဖြစ်ပါတယ်။
တရားမျှတမှုဒုတိယအခြေခံမူမှာ (က)အရဆိုရင် အခွင့်အရေး၊ အခွင့်အလမ်း အနည်းဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို အကျိုးခံစားရမှု များများ ရနေအောင် အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးထားရမယ်။ တစ်နည်းပြော ရရင် မတူညီတဲ့ လူတွေကို တူညီတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့် တွေ ရနေအောင် ဖန်တီးပေးရမယ်။ (ခ)အရဆိုရင် တော့ အားလုံးအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေဟာ တန်းတူ ညီမျှ ဖြစ်နေရမယ်။
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အခြေအနေအမျိုးမျိုး ကြောင့် အခွင့်အလမ်းနဲ့ အခွင့်အရေး ရရှိမှု နည်းနေ တတ်တယ်။ ဥပဒေတွေထဲမှာ၊ မူဝါဒတွေထဲမှာ တန်းတူ ညီမျှ အခွင့်အရေးတွေ ပေးထားတယ်၊ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျိုးခံစားရရှိမှုကျတော့ ကိုယ်ပိုင်အားနည်းချက် အမျိုးမျိုးကြောင့် မတူညီဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ]]ပေးကား ပေး၏၊ မရ}}ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပါ တယ်။
ဥပမာပြရရင် နိုင်ငံမှာ လူတိုင်း တက္ကသိုလ်တက် ခွင့် ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် တကယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ ငွေကြေးချို့တဲ့လို့ ကျောင်းတောင် မတက်နိုင် တဲ့သူတစ်ယောက်အဖို့ တက္ကသိုလ်ကို ဘယ်လို တက် နိုင်မှာတဲ့လဲ။ အဲဒါဆိုရင် သူ့အဖို့ တက္ကသိုလ်ကို ဘယ်လို ရောက်နိုင်တော့မှာလဲ။ ဒီလို တက္ကသိုလ်တက် ဖို့ နေနေသာသာ ကျောင်းတောင် မတက်နိုင်တဲ့သူတွေ ကို တက္ကသိုလ်တက်နိုင်မယ့်၊ တက္ကသိုလ်ရောက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို နိုင်ငံက ဖန်တီးပေးထားရမယ်။ ဒါဟာ အခွင့်အလမ်းအနည်းဆုံးသူတွေကို အကျိုး ကျေးဇူးအများဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရတာပါပဲ။ ဒီလို လုပ်ပေးမှလည်း လူအချင်းချင်း၊ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ကြားမှာ တရားမျှတမှု ရှိမယ်လို့ ယူဆထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
နိုင်ငံသားချင်းအတူတူ တချို့က ငွေကြေးနဲ့ ကုသနိုင်လို့ အသက်ရှင်ရတယ်၊ အသက်ရှည်ရတယ်။ တချို့က ငွေကြေးချို့တဲ့ပြီး မကုသနိုင်လို့ အသက် သေရတယ်၊ အသက်တိုကြရတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ဒီငွေ ကြေးချို့တဲ့သူတွေ အသက်မသေရလေအောင်၊ အသက် မတိုရလေအောင် ကုသနိုင်မယ့် နေရာတွေကို ဖန်တီး ပေးထားရပါမယ်။ အခြားသူတွေ ဆေးကုသနိုင်လို့ အသက်ရှင်ကြ၊ အသက်ရှည်ကြရပြီး သူတို့ကျမှ ဆေး မကုသနိုင်လို့ အသက်သေကြရ၊ အသက်တိုကြရမယ် ဆိုရင် ဒါဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အခွင့်အလမ်းနည်းတဲ့ သူတွေကိုလည်း အခြားသူတွေ ခံစားကြရတဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးတွေကိုတော့ ခံစားကြရလေအောင် နိုင်ငံက၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ဖန်တီးပေးထားကြရပါမယ်။ ဒါမှ သာ တရားမျှတမှု ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် ရာထူးဌာနန္တရတွေကို ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေက တူညီနေရမယ်။ ဒါမှ တရားမျှတမှု ရှိနိုင်တယ်။ လွတ်တော်အမတ်ဟာ လူတိုင်း ဖြစ်ခွင့် ရှိရမယ်။ တရားသူကြီးဆိုတာလည်း လူတိုင်း ဖြစ်ခွင့် ရှိရမယ်။ သမ္မတတို့ ဝန်ကြီးတို့ဆိုတာ တွေကလည်း လူတိုင်း ဖြစ်ခွင့် ရှိနေရမယ်။ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ခွင့်ဟာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေရမယ်။ အကပ်ရှိမှ ဖြစ်နိုင် မယ်၊ အကပ်မရှိရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဒါဟာ တရား မျှတမှု ကင်းမဲ့တဲ့သဘော ဖြစ်သွားပါတယ်။ လူတိုင်း အတွက် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အလမ်းတွေ ရနေနိုင် အောင် လမ်းတွေ ဖွင့်ထားပေးရမယ်။ အချို့သူတွေ အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖွင့်ထားပေးပြီး အချို့ သူတွေအတွက် ပိတ်ထားတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ တရား မျှတမှု မရှိခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း နဲ့ တန်းတူညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကို အထပ်ထပ် အကြိမ်ကြိမ် ဆိုခဲ့၊ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တရားမျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ လောကပါလတရားတွေကို ဘယ်လောက် ရနေကြပါပြီ လဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာ ၆၉ နှစ်ပြည့်လို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၇၃ နှစ် ပြည့်ပါပြီ။ တရား မျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ညီမျှခြင်းဆိုတဲ့ ကောင်း ခြင်းတရားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ကာလသုံးမျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ် ကြည့်ပါမယ်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကာလတွေကို နောက်ပြန် ပိုင်းခြားကြည့်တဲ့အခါ အရပ်သားအစိုးရက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နေတဲ့ လက်ရှိကာလ၊ ၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ တတိယစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကာလ၊ ၁၉၆၂ ကနေ ၁၉၈၈ အထိ ဒုတိယစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကာလ၊ ၁၉၄၈ ကနေ ၁၉၆၂ အထိ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီကာလ (ဒီပါလီ မန်ဒီမိုကရေစီကာလထဲမှာ ၁၉၅၈ ကနေ ၁၉၆၀ အထိ ပထမစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကာလ ရှိနေတာကို သတိ ပြုရပါမယ်။)ဆိုပြီး ကာလအမျိုးမျိုးကို တွေ့ရပါလိမ့် မယ်။
အဲဒီတော့ အတိတ်ကာလကို ၁၉၄၈ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ပိုင်းမယ်ဆိုရင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကာလနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကာလဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီကာလ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှနဲ့ ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်းနေရာ ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၆၂ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကာလကတော့ မြန်မာဟာ အာရှကို ကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာ့အောက်ဆုံးဆိုတဲ့ ချောက် ကြီးထဲကို တွန်းချခံရလို့ ကျရောက်သွားရတဲ့ ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အတိတ်ကာလတစ်ခုအဖြစ် သတ် မှတ်ပြီး တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှု ဆိုတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ ရှုမြင်ကြည့်ပါ မယ်။
၁၉၆၂ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ကာလမှာ မကောင်း ဆိုးဝါး မိစ္ဆာစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ နောက်လိုက် နောက်ပါတွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ မြေပေါ်မြေအောက် သယံ ဇာတအကုန်လုံးကို ကုန်အောင် ရောင်းစားသွားခဲ့ပါ တယ်။ သစ်တောတွေ အကုန် ကုန်အောင် တောင်တွေ ကတုံးဖြစ်တဲ့အထိ ခုတ်သွားပါတယ်။ တောင်ပေါင်း များစွာကို တူးဖြိုပြီး ကျောက်စိမ်းနဲ့ အခြားရတနာတွေ ကို တူးယူသွားပါတယ်။ ကုန်းတွင်းနဲ့ ကမ်းလွန်တွေပါ မကျန်အောင် ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို တူးပြီး ရောင်း စားသွားတဲ့အပြင် ကြိုပြီးပါ ရောင်းစားထားခဲ့ပါသေး တယ်။ မြေယာဧကပေါင်းများစွာကို မတရားသိမ်း ယူပြီး ရောင်းစားသွားပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးမှန် သမျှ အကုန် လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒီအခွင့် အရေးကို ကျန်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေက မရကြပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါ တွေကပဲ ရရှိကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတနဲ့ ပတ် သက်လို့ ဘယ်မှာလဲ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး၊ ဘယ်မှာလဲ တရားမျှတမှု။
ဒီအတိတ်ကာလတွေမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လွတ် လပ်မှုမှန်သမျှကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်မှုဟာ လူတွေကို အသိÓဏ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကူပံ့ပေးနိုင် တယ်။ လွတ်လပ်မှုရှိရင် လူတွေဟာ လွတ်လပ်စွာ တွေးကြတော့မယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောကြတော့မယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားကြတော့မယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ဖတ်ရှုလေ့လာကြတော့မယ်။ ဒါတွေက လူတွေကို အသိနဲ့ Óဏ်ပညာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အသိနဲ့ Óဏ်ပညာတွေ ရှိလာရင် လူတွေဟာ မကောင်းဆိုးဝါး မိစ္ဆာစစ်အာဏာရှင်တွေကို တွန်းလှန်ပစ်ကြပါလိမ့် မယ်။ အဲဒီတော့ မိစ္ဆာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ကို ဒုက္ခပေးမယ့် လွတ်လပ်မှုဆိုတာကို လုံးဝ သော့ခတ် ထားလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီကာလတွေမှာပဲ လွတ်လပ်မှု ရနေတဲ့ သူတွေကလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ၊ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေ၊ စစ်အာဏာရှင် တွေရဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေဟာ လွတ်လပ်မှုတွေ အပြင် ရမ်းကားမှုတွေပါ ရနေကြပါတယ်။ အဲဒီစစ် အာဏာရှင်တွေနဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေဟာ သူတို့ လုပ်ချင်တာအကုန်လုံးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ရနေကြတယ်။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေကတော့ သူတို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဘာမှ လုပ်ခွင့်မရဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပါ တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း၊ အပိုဒ်(၅)မှာ ]]ငါတို့နိုင်ငံတော်ကြီးသည် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း၏ အမွေအနှစ် မဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ တစ်ဖွဲ့တစ်သင်း ၏ ပုဂ္ဂလိကအပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၊ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့တစ်သင်းက ချုပ်ကိုင်အနိုင် သိမ်းယူ အကျိုးခံစားအပ်သော နိုင်ငံမဟုတ်၊ အတိတ် ကာလကゞင်း၊ ယခုမျက်မှောက်တွင်ゞင်း၊ နောင်လာ လတ္တံ့သော အနာဂတ်ကာလ၌လည်းကောင်း၊ ငါတို့ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်း၌ မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ကြီးငယ်ဝေးနီးကား မခြား၊ သစ္စာတော်ခံနိုင်ငံသား ဟူသရွေ့တို့၏ အမွေအနှစ်အပိုင်ပစ္စည်း အကျိုး ခံစားရာ ဖြစ်သည်}}လို့ ဆိုထားပေမယ့် တကယ့် တကယ်မှာတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ နောက်လိုက် နောက်ပါတွေကသာ နိုင်ငံတော်ကို သူတို့အပိုင်ပစ္စည်း လို အသုံးချခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံတော်မှာ ရှိနေတဲ့ ကျန် နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကတော့ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှုတွေနဲ့ပါ ကင်းဝေးနေခဲ့ကြ ရပါတယ်။
ဒီကာလတွေမှာ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမိတဲ့သူတွေ ဟာ ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချတာကို ခံခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒါ အပြင် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားစတဲ့ မီဒီယာတွေကနေလည်း ဆဲဆိုရမ်း ကားမှုတွေကိုပါ ခံကြရပါသေးတယ်။ စစ်အာဏာရှင် တွေနဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေရဲ့ သားသမီးတွေဟာ လည်း လွတ်လပ်မှုမှန်သမျှကို ရယူထားတဲ့အပြင် ရမ်းကားမှုတွေပါ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီလို ရမ်းကား မှုတွေကို ခံခဲ့ကြရတဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ တရားမျှတမှု ကို ပြန်လည်မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။
ဒါတွေက အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြောပြောနေရတာက အဲဒီအတိတ်မှာပဲ ရပ်နေဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိပြုရပါလိမ့်မယ်။ အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို နောက်တစ်ဖန် ထပ်မဖြစ်ပေါ်ရလေအောင် သင်ခန်းစာ အနေနဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေက ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ကာလကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဆန်းစစ် ပြီးတဲ့အခါ အခုပစ္စုပ္ပန်ကာလကို သုံးသပ်ဆင်ခြင် ရှုမြင်ကြည့်ကြပါမယ်။ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ နိုင်ငံ တော်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးမှန်သမျှကို ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ လည်ပတ်နေရပါ တယ်။ ဒါဟာ အရှိတရား ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံ သားတစ်ယောက်က တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာတစ်ဝက် လောက်ကို ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရရှိနေပြီး ကျန်နိုင်ငံသား အားလုံးကတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကြီးအကဲ သမ္မတကို တောင် ရွေးချယ်ခွင့် မရရှိကြတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို မဲတစ်မဲနဲ့ နိုင်ငံသားပေါင်း ထောင်နဲ့ချီတဲ့အရေအတွက်က လွှတ် တော်အမတ်တစ်ယောက်ကိုပဲ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိနေပေ မယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်တွေရဲ့ လွှတ် တော်အမတ်လေးပုံတစ်ပုံကိုတော့ နိုင်ငံသားတစ် ယောက်တည်းက ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ရနေပါတယ်။ ဒါက နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေး မရှိတာမို့လို့ နိုင်ငံရေးတရားမျှတမှု မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ရပ်တည်လို့ မရနိုင်တဲ့ ဝင်ငွေ ၁၂၀ဝ၀ဝ (တစ်သိန်းနှစ်သောင်း) ရသူကို အခွန်ဆောင်ခိုင်းထားပြီး နိုင်ငံရဲ့ အရင်း အမြစ်တွေကို အများဆုံး သုံးစွဲခွင့် ရနေတဲ့သူတွေကျ တော့ အခွန် နည်းနည်းပဲ ဆောင်ရတာတွေ ဖြစ်နေပါ တယ်။ အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ နိုင်ငံရဲ့ အရင်းအမြစ် တွေကို အများဆုံး သုံးစွဲတဲ့သူတွေဟာ အခွန်ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဆောင်ကြရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဲဒီလို အများဆုံး သုံးစွဲတဲ့သူ တွေဟာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ဆောင်ကြရတာတွေ ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ဘယ်မှာတဲ့လဲ စီးပွားရေးတရားမျှတမှု။
]]မိန်းမများသည် တူညီသော အလုပ်အတွက် ယောကျာ်းတို့ ရသော လခမျိုးကို ရနိုင်ရမည်။}} (ပုဒ်မ(၁၅)၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ၁၉၄၇။) ဒီလို ပုဒ်မမျိုးကို ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၃၅၀)မှာလည်း ]]အမျိုးသမီးများသည် တူညီသော အလုပ်အတွက် အမျိုးသားများ ခံစားခွင့်ရှိသော အခွင့် အရေးနှင့် လစာတို့ကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။}}ဆိုပြီး ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ(၃၅၂)ထဲမှာတော့ ]]အမျိုးသားများနှင့် သာ လျော်ကန်သင့်မြတ်သည့် ရာထူးတာဝန်များ အတွက် အမျိုးသားများအား ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းကို ဤပုဒ်မအရ အဟန့်အတားမဖြစ်စေရ။}}ဆိုပြီးတော့ ထပ်မံထည့်သွင်းထားကာ အမျိုးသမီးတွေကို ခွဲခြား ထားပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေဟာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲက လူမှုရေးတရားမျှတမှု မရှိခြင်း တချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိပညာရေးစနစ်နဲ့ လည်ပတ် နေတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း အမှတ်သတ်မှတ်မှု မညီမျှခြင်းက စလို့ ကျားမခွဲခြားထားတဲ့ အခြားအရာ တွေလည်း အများအပြား ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါတွေက လည်း လူမှုရေးတရားမျှတမှု မရှိတာကို ပြဆိုနေပါ တယ်။
ဒီမှာ ထုတ်နုတ်ပြထားတာက ဥပမာတချို့ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ လူမှုရေး တရားမျှတမှု မရှိတာ၊ နိုင်ငံရေးတရားမျှတမှု မရှိတာ၊ စီးပွားရေးတရားမျှတမှု မရှိတာတွေဟာ ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ သွားနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများအပြား ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါက လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် ကာလရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အနာဂတ်မှာရော မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ဖြစ်လာမှာတဲ့လဲ။ အနာဂတ်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံကို ဘယ်လို နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်စေချင်သလဲ၊ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လို လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုး ဖြစ်စေ ချင်သလဲဆိုတာကို လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ဆုံးဖြတ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အစည်းကို တရားမျှတမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ တရားမျှတမှုရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လွတ်လပ်မှုရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ လွတ်လပ်မှု ရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ တန်းတူညီမျှမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ တန်းတူ ညီမျှမှုရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်စေချင်သလား။ ဒီလို ဖြစ်စေချင်ရင် ဒီလို နိုင်ငံမျိုး၊ ဒီလို လူ့အဖွဲ့အစည်း မျိုးကို ရရှိအောင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အခုကတည်း က တည်ဆောက်ထားရပါလိမ့်မယ်။
စားသုံးလိုတဲ့ အသီးကို လိုချင်ရင် အဲဒီအသီး သီးတဲ့ အပင်မျိုးကို စိုက်ပျိုးယူရသတဲ့။ အရိပ်ကို ခိုချင် ရင်တော့ နေပူက စောင့်ကြရသတဲ့လေ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုးတက်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှကို အဲဒီလူ့အဖွဲ့ အစည်းက လူတွေဟာ အချောင်ရခဲ့တာတော့လည်း မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။
တရားမျှတမှုလား၊ လွတ်လပ်မှုလား၊ တန်းတူညီ မျှမှုလား။ အဲဒီကောင်းမြတ်ခြင်းတရားတွေ မရှိပါဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာကရော ဖြစ်နိုင်ပါမတဲ့လား။ သင် ဘာကို အလိုရှိပါသလဲ။ ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှ ဖြစ် မလာဘူးဆိုတဲ့ စကားကို သင်လည်း ကြားဖူး၏၊ ကျွန်ုပ် လည်း ကြားဖူး၏၊ အခြားသူများလည်း ကြားဖူးထား ကြပါ၏။ ဘယ်လို နိုင်ငံမျိုးနဲ့ ဘယ်လို လူ့အဖွဲ့အစည်း မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနိုင်ငံနဲ့ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းကို တကယ် ဖန်တီးတည်ဆောက်သူတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံ သားတွေ၊ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းက လူတွေကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်လှပါ တယ်ဆိုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကပဲ တည်ဆောက်ယူရမည်သာ ဖြစ်ပါ ကြောင်း။
တရားမျှတ-လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ၊ ခွင့်တူညီမျှ လို့ ဝါဒလည်း ဖြူစင်ကြစေ။ Óဏ်ပညာနဲ့ ချစ်ခြင်း တရားတွေလည်း တိုးပွားဖြစ်ထွန်းကြပါစေတည့်လေ။
၁။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ၁၉၄၇။
၂။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ၂၀ဝ၈။